Beauty Archives - Shop
Shop > All Articles > Beauty
မွဲခြောက်ညစ်ညမ်းနေတဲ့ သင့်အသားအရေကို နှုတ်ဆက်ပေးမယ့် Vitamin-C (9) မျိုး015
The KaungHtet May 20, 2022 10:25 am May 20, 2022
Vitamin-C က ကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက်အသုံးပြုရာတွင်အကောင်းဆုံး ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အသားအရေအတွက်ရော အသုံးပြုလို့ရနိုင်မလား? အဖြေကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အသုံးပြုလို့ရတဲ့အပြင် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Vitamin-C ပါဝင်တဲ့ Skincare တွေဖြစ်တဲ့ Serum တွေဟာလည်း ယနေ့အလှကုန်စျေးကွက်ထဲမှာ …
ဝက်ခြံကင်းရှင်းတဲ့ မျက်နှာလေးရရှိဖို့ မျက်နှာသစ် (10) မျိုး068
မြန်မာ့ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီပြီး မြန်မာလူမျိုးများအတွက်သင့်တော်တဲ့ Acne Face Wash (ဝက်ခြံမျက်နှာသစ်) ကိုရှာဖွေနေပြီလား?Shop App မှ မြန်မာပြည်စျေးကွက်ထဲရှိ အကောင်းဆုံးတွေထဲက Acne Face Wash (10) မျိုးကို ကျပန်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Mentholatum Acnes …
Sunscreens For Summer!0506
နွေရာသီရဲ့ ပူပြင်းတဲ့နေပူဒဏ်က မိမိရဲ့ အပေါ်ယံအရေပြားကို အကာအကွယ်မဲ့စွာ ထိတွေ့ခြင်းက မလိုလာတဲ့ဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ မရွယ်မတိုင်မီ အရေးကြောင်းများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက်ထွက်ခြင်း၊ အသားအရောင်မညီညာခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးအဆိုးဆုံးအခြေအနေဖြစ်တဲ့ အရေပြားကင်ဆာအထိ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကဲ.. ဒီလိုဆို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ?နေပူထဲထွက်လျှင် UV ပါသောထီးဆောင်းပါ။ အင်္ကျီလက်ရှည်အပါး …
Collagens For Summer!0362
The KaungHtet March 24, 2022 7:25 am March 24, 2022
Summer rays can harm your skin by forming more wrinkles, increased skin discoloration. Without protection, these issues can lead to …
9 Top Rated Beauty Products0426
The KaungHtet March 3, 2022 2:24 pm March 3, 2022
Nowadays, there are various beauty products in the market that make customers confused when it comes to choosing the best …
Stay at Home, Workout with Shop!087
The KaungHtet February 24, 2022 6:59 am February 24, 2022
“အိမ်မှာနေရင်း ကျန်းမာလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရရှိအောင် Trainer များဖြင့် နည်းစနစ်ကျကျ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်လိုသူများအတွက် Shop App MM – YouTube channel ရှိ အခမဲ့ FREE workout video များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။” …